အစာရှောင်ဆုတောင်းသောအခါ | When You Fast | Real Conversion
ဩဂုတ်လ ( ၁၆ ) ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဟောကြားသော
"သင်တို့သည် အစာရှောင်သောအကျင့်ကိုကျင့်သောအခါ" (မဿဲ ၆း၁၆)
ယေရှုကိုယ်တိုင်သည်လည်း ဤလောက၌အမှုတော်မစတင်မှီက အစာရှောင်ဆု တောင်းခဲ့ပါသေးသည်။ ယေရှုက သူ့တပည့်တော်များအား ၎င်းသည်ကောင်းကင်ဘုံသို့တက် ကြွတော်မူပြီးနောက်တွင် အစာရှောင်ရကြမည်အကြောင်း မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ သူက ဤသို့ဆို သည်။
"ထိုအခါ သူတို့သည် အစာရှောင်ကြလိမ့်မည်။"(မဿဲ ၉း၁၅)
ဒေါက်တာ John R. Rice က ဤသည်မှာ ပတ္တေကုတ္တိနေ့မတိုင်မှီ နိူးထမှုရရှိနိူင်ဖို့အဖို့ ဆယ် ရက်လောက်အစာရှောင်ဆုတောင်းကြသည်ကိုပြသကြောင်းဆိုခဲ့သည်။ ထိုအရာမှာ ဖြစ်နိူင်စ ရာရှိသည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်မိသည်။ တမန်တော်ရှင်ပေါလုက ပြောင်းလဲလာသည့်အချိန်တွင် သုံးရက်ခန့် အစာရှောင်ဆုတောင်းခဲ့သည်။ (တမန် ၉း ၉-၁၁) အန္တီအုတ်မြို့ရှိအသင်းတော်က လည်း ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကိုသိနားလည်ကြရန် အစာရှောင်ဆုတောင်းကြသည်။ (တမန်တော် ၁၃း ၂) ဆက်လက်၍ သူတို့သည် သာသနာပြုများအဖြစ် ပေါလုနှင့်ဗာနဗကိုစေ လွှတ်သောအချိန်တွင်လည်း ( တမန် ၁၃း ၃) "အစာရှောင်ပြီးဆုတောင်း" ကြသည်။ တမန် တော်ရှင်ပေါလုက သူသည် "အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းကိုမကြခဏဆိုသလို" လက်တွေ့လုပ် ဆောင်တော်မူကြောင်းဆိုခဲ့သည်။ ( ၂ကော ၁၁း ၂၇ ) ထို့နောက် ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုထားသော ကျမ်းပိုဒ်တွင်လည်း ယေရှုက ကျွန်ုပ်တို့အစာရှောင်ဆုတောင်းသင့်ကြောင်းဆိုခဲ့သည်။ သူက "သင်တို့သည်အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းအကျင့်ကိုကျင့်ကြသောအခါ" ဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည်။ (မဿဲ ၆း ၁၆) ဆက်၍ "သူတို့သည် အစာရှောင်ကြလိမ့်မည်" ဟုလည်း မိန့်တော်မူပြန်သည်။ (မဿဲ ၉း ၁၅)
ကျွန်ုပ်သည် ဒေါက်တာ J. Vernon McGee ကို လွန်ပင်အားကျမိပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၁၉၆ဝခုနှစ်တွင် သူ၏တစ်ပိုဒ်ချင်းရှင်းလင်းသည့် လေဒီယိုအစီအစဉ်ကို နား ထောင်ခြင်းအားဖြင့် ကျမ်းစာတစ်ခုလုံးကိုပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောကျမ်းပိုဒ်ဖြစ် သည့် "သင်တို့သည် အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းအကျင့်ကို ကျင့်ကြသောအခါ" နှင့်ပါတ်သက် ၍၊ ဒေါက်တာ McGee က "ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်ကာလတွင် အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်း၌ ယုံကြည်သူများအတွက် အကျိုးများစွာရှိသည်၊ ထိုအရာကိုကျွန်ုပ်နားလည်သည်" ဟုဆိုသည်။ (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers. ၁၉၈၃၊ အတွဲ ၄၊ စာ- ၃၈)
လူအချို့က ယှေုသည် ဤမဿဲ ၆း ၁၆-၁၈ တွင် အစာရှောင်ခြင်းအကြောင်းကို ဆန့် ကျင်ပြီးသွန်သင်သည်ဟု ထင်မြင်ယူဆကြသည်။ သို့ရာတွင် ၎င်းတို့၏ထင်မြင်ချက်မှာ အလွန် မှားယွင်းနေပါသည်။ သူသည် Scofield က ရေးမှတ်ထားသကဲ့သို့ "ရုပ်ဝါဒီ"ကို ဆန့်ကျင်သွန် သင်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သူက အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းကို အခြားသူများမြင်တွေ့စေရန်အ တွက် မိစ္ဆာဒိဌိဆန်ဆန်လုပ်ဆောင်နေခြင်းကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သည်။ သို့ရာတွင် မှန်ကန် သောအစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းကိုမူ လုံးဝဆန့်ကျင်ထားခြင်းမရှိပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်သဘောအ နေဖြင့် သူပြောဆိုထားသည်မှာ ''သင်တို့သည် အစာရှောင်ခြင်းအကျင့်ကိုကျင့်ကြသောအခါ" အဘယ်သို့ အစာရှောင်ဆုတောင်းရမည်ကို သွန်သင်ထားသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆုတောင်းရ မည်ဟူသောအချက်ကိုလည်း ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ယေရှုက "အကယ်၍ဆုတောင်းလျှင်" ဟု မိန့်တော်မမူပါ။ လုံးဝပင်မပြောပါ။ "အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းအကျင့်ကိုကျင့်ကြသောအ ခါ" ဟုသာမိန့်တော်မူသည်။
အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းတွင် အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိသည်။ သို့သော် အရင်က နာမ ကျော်ကြားလှသော သမ္မာကျမ်းစာအနက်ဖွင့်သူ Matthew Henry ကလည်း "ထိုအရာကို ခရစ်ယာန်အသိုင်းအဝိုင်း၌ လစ်လျူရှုထားကြပါသည်" ဟုမြည်တမ်းစကားဆိုခဲ့သည်။ (မဿဲ ၁၆း ၁၆ မှတ်စု) Matthew Henry သေဆုံးပြီး နှစ်ပေါင်း ၂၅ နှစ်ကြာသောအခါ ဂျွန်ဝယ်စလီက တစ်ပတ်လျှင် နှစ်ရက်အစာရှောင်ခြင်းအားဖြင့် ကနဦးခရစ်ယာန်များ၏သာဓကကိုယူရန် မိမိလူ များကိုပြောခြင်းအားဖြင့် လက်တွေ့သဘောတရားကို ပြန်လည်အသက်သွင်းခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်၍ ပထမနိူးထမှုကြီးသည် အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းတွင်ရရှိသည့်အသစ်သောစိတ်ဝင်စားမှုအ ချိန်ခါသမယတွင် အစပြုမွေးဖွါးလာသည်။ အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဤအသက်သွင်းအလေးအနက်ပြောဆိုမှု၏အမြစ်သည် ခရစ်တော်၏ဖော်ပြမိန့်တော်မူချက် တွင်အခြပြုထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ယနေ့ဆုတောင်းသည့်အခါ ဆုတောင်းရမည့်အကြောင်းတရားများစွာရှိတော်မူ ကြောင်းသမ္မာကျမ်းစာက သွန်သင်ထားပါသည်။ ထိုအထဲက သုံးချက်ကို ယနေ့ညတွင် သွန်သင်ပါမည်။
၁။ ပထမအချက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစာရှောင်ဆုတောင်းရန်လိုအပ်ပြီး ၎င်းမှာ စာတန်၏တန်ခိုးကိုအနိူင်ယူဖို့ ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းရန်ဖြစ်သည်။
မာကု ၉း ၂၈-၂၉ ကိုကြည့်ကြပါစို့။ ထိုကျမ်းနှစ်ပိုဒ်ကို မတ်တပ်ရပ်ပြီးဖတ်ကြပါစို့။
"အိမ်သို့ဝင်တော်မူပြီးမှတပည့်တော်တို့က၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် ထို နတ်ကို အဘယ့်ကြောင့် မနှင်ထုတ်နိူင်ပါသနည်းဟု တိတ်ဆိတ် စွာမေးလျှောက်ကြသော်၊ ကိုယ်တော်က၊ ဆုတောင်းခြင်း၊ အစာ ရှောင်ခြင်းမှတပါး အဘယ်သို့သောအားဖြင့်၊ ထိုနတ်မျိုးသည် မထွက်နိူင်ဟုမိန့်တော်မူ၏။" (မာကု ၉း ၂၈-၂၉ )
ထိုင်နိူင်ပါပြီ။ အရင်တရားဒေသနာတွင် ကျွန်ုပ်ပြောခဲ့သည်အတိုင်း မာကု ၉း ၂၉ ရှိ ခေတ်သစ် ဘာသာပြန်ဆိုချက်အားစုက ပယ်ထားသည့် "နှင့်အစာရှောင်ခြင်း" စကားလုံးမှာ မှားယွင်း သည်ဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်မိသည်။ အကြောင်းအရာဝေဖန်ရေးပေါ်အခြေခံလျက် မှားယွင်းမှုတစ် ခုဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်မိသည်။ ဤခေတ်သစ်ဘာသာပြန်ဆိုကျမ်းများ၌ "နှင့်အစာရှောင် ခြင်း" အကြောင်းကိုပယ်ဖျက်ကြသည်မှာ ဝမ်းနည်းစရာပင်ဖြစ်သည်။ ဤစကားလုံးများကိုချန် လှစ်ထားခဲ့သည် ဘုရားမဲယဇ်ပုရောဟိတ်များအဖြင့် ရေးသားသည့် စာမူဟောင်းနှစ်ခု၏လွှမ်းမိုး မှုဖြစ်မည်။ ထို့ကြောင့် ဘာသာပြန်သစ်ကိုဖတ်ရှုကြသည့် အနောက်တိုင်းက ခရစ်ယာန်များ၏ အတွေးထဲက အစာရှောင်ခြင်းကိုပယ်ရှားပစ်သည့် အရေးကြီးသည့်အကြောင်းတရားများထဲက တစ်ခုသည် မေးခွန်းထုတ်စရာကောင်းလှသည့် စာမူနှစ်ခုပေါ်တွင် အခြေခံထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်က စာတန်ကိုတွန်းလှန်ဖို့ တန်ခိုးအနည်းငယ်သာရှိသည်မှာ အံ့ဩစရာ မဟုတ်။ ဒေါက်တာ John R. Rice က ''ဤကလေးသည် တကယ် နတ်ဆိုး (မာရ်နတ်) စွဲ သည်ဟု သံသယမရှိကြပါစို့နှင့်၊ ဝိညာဉ်ဆိုးသည် ငါတို့အကြောင်းဖြစ်သည်" ဟုဆိုသည်။ (ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းနှင့်ပါတ်သက်၍ အနက်ဖွင့်ဆိုချက်၊ Sword of the Lord Publishers, ၁၉၈၀၊ စာ-၃၆၄၊ မဿဲ ၁၇း ၁၄-၂၁ မှတ်ချက်) သမ္မာကျမ်းစာက ဤသို့ဆိုသည်။
"ငါတို့သည် အသွေးအသားရှိသောရန်သူတို့နှင့်ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန် ရကြသည်မဟုတ်။ အထွဋ်အမြတ်တို့နှင့်၎င်း၊ အာဏာစက်တို့နှင့် ၎င်း၊ လောကီမှောင်မိုက်၌အစိုးတရပြုလုပ်သော မင်းတို့နှင့်၎င်း၊ မိုဃ်းကောင်းကင်၌နေသော နတ်ဆိုးတို့နှင့်၎င်း၊ ဆိုင်ပြိုင်တိုက် လှန်ရကြ၏။" (ဧဖက် ၆း ၁၂ )
ယနေ့ခေတ်အချိန်ခါတွင် ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် အသင်းတော်ကို တည်ဆောက်ရန်မှန်အလွန်ပင် ခက်ခဲလွန်းလှသည်။ သို့သောကြောင့် လူအချို့တို့ကမူ အမေရိ ကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်းသည် သေလျက်ရှိသည်ဟု ဆိုကြသည်။ ၎င်းက ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်ခါတွင် စာတန်၏တန်ခိုးသည် အလွန်ပင်ကြီးထွားသည့်သဘော ကျွန်ုပ်ခံစား မိသည်။ "မြင့်မြတ်သောနေရာများ၌ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုးသွင်းမှုများ" ကိုအနိူင်ယူကျော်လွှား နိူင်ရန် ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာတွင် အလွန်ပင်လိုအပ်လျက်ရှိ သည်ဟု ထင်မိသည်။ စာတန်၏ခိုင်မာသောရဲတိုက်ကို ဖြိုဖျက်အနိူင်ယူရန် ဘုရားသခင်ထံပါး သို့ အစာရှောင်ပြီး ဆုတောင်းကြပါစို့။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်အတွက်အောင်ပွဲကိုရယူရန် ကြိုးစားအားထုတ်ကြသည့်လူများအပေါ် စာတန်သည် ထိုသို့သောတန်ခိုးများဖြင့် လွှမ်းမိုးလာ သောအခါ အသင်းတော်၌ရှိသော ယနေ့ခေတ်ကာလ၏မှားယွင်းမှုနှင့်အေးစက်စက်နိူင်မှုများ တွင် လုံး၀ သဘာဝကျဟန်ရှိပါသည်။ ဓမ္မသီချင်းနံပါတ် ၆ "ဆုတောင်းခြင်းကိုသွန်သင်မူပါ"၊ ဒုတိယစာပိုဒ် "ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ရရှိသောတန်ခိုးတော်'' ကိုသီဆိုကြပါစို့။
ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်တန်ခိုးတော်၊ သခင်ဘုရား၊ ထိုတန်ခိုးတော်၊
အပြစ်၊ ဝမ်းနည်းခြင်း၊ နှင့်စောင့်ရှောက်မှုလောကအလယ်မှာ။
တန်ခိုးတော်ပေးပါ၊ တန်ခိုးတော်ပေးပါ၊ ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်။
("ဆုတောင်း၇န်သွန်သင်မူပါ" ၊ Albert S. Reitz, ၁၈၇၉-၁၉၆၆ ရေး စပ်သည်။ )
ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်ရရှိသောတန်ခိုးတော်သည် အစာရှောင်ခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် နေသည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်မိသည်။ ယေရှုက ဤသို့မိန့်တော်မူခဲ့သည်။
"သင်တို့သည် အစာရှောင်သောအကျင့်ကိုကျင့်သောအခါ"(မဿဲ ၆း၁၆)
၂။ ဒုတိယအချက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အစာရှောင်ဆုတောင်း ရန်လိုအပ်ပြီး ၎င်းမှာ နိူးထမှုကိုစေလွှတ်ခြင်းအားဖြင့် ကြားဝင်ဖြန် ဖြေပေးဖို့ ဘုရားသခင်ကို ဆုတောင်းရန်ဖြစ်သည်။
အရာအားလုံးသည် နိူးထမှုအပေါ်တည်နေသည်ဟု မထင်မိပါ။ သို့သော် ၁၈၅၉ ခုနှစ် ကစတင်၍ တစ်နိူင်ငံလုံးနိူးထမှုသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် မရှိတော့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ နိူင်ငံရှိဒေသန္တာရအသင်းတော်ရ နိူးထမှုတစ်ခေါက်တစ်လေတွေ့ဖို့ပင် အလွန်ပင်ခဲယဉ်းသွားခဲ့ ပါသည်။ ဒေါက်တာ Ken Connolly က "ကျွန်ုပ်တို့သည် နိူးထမှုလုံးဝမသိမမြင်ရသည့်ခေတ် ကာလတွင် အသက်ရှင်နေထိုင်ကြသည်" ဟူသောပြောစကားကို သတိရမိသေးသည်။ သို့သော် တမန်တော်ရှင်ပေါလုက နိူးထမှုအကြောင်းကို ကောင်းစွာသိသည်။ တမန်တော်ဝတ္ထု တစ်လျှောက်လုပ်ဆောင်သမျှသောအစီအစဉ်ကို ဘုရားသခင်ကြွလာတော်မူပြီး ကောင်းကြီး ပေးတော်မူသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရှင်ပေါလုရေးသားသည်ကို ဖတ်ရှုသည့်အခါ အံ့ဩစရာမလို ပေ။
"ကြိမ်ဖန်များစွာအစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းအမှုတွင်" (၂ကော ၁၁း ၂၇ )
ခရစ်ယာန်ဓမ္မပညာရှင် ဒေါက်တာ Schaff က ကနဦး "ခရစ်ယာန်များသည် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နှင့် အထူးသဖြင့် သောကြာနေ့ကို အစာရှောင်ဆုတောင်းရာနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ကြသည်" ဟု ဆိုပါသည်။ (Philip Schaff, Ph,D., ခရစ်ယာန်အသင်းတော်သမိုင်း၊ Eerdmans Publishing Company, ၁၉၇၆၊ အတွဲ ၂၊ စာ-၃၇၉) ဤအကြောင်းအရာကို ပထမအကြိမ်နိူးထမှုကြီးတွင် ဂျွန်ဝယ်စလီက ပြန်လည်အသက်သွင်းခဲ့သည်။
အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ဆုတောင်းခြင်းသည် နိူးထမှုကို အလိုအလျောက်ဖြစ်လာစေနိူင် သည်ဟု ကျွန်ုပ်လုံးဝမထင်ပါ။ အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ဆုတောင်းခြင်းအတွက် လိုက်လျောညီထွေမှု ရှိသည် နေ့ရက်များရှိသည်ဟုလည်း မစဉ်းစားမိပါ။ ထိုအကြောင်းကို သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် တွေ့မြင်ထားခြင်းမရှိပါ။ သို့သော် ယနေ့ကာလတွင် အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ဆုတောင်းခြင်းမပါဘဲ နိူးထမှုကြုံတွေ့နိူင်သည့်နည်းလမ်းလည်း မတွေ့ရပါ။ ဒေါက်တာ John R. Rice က ဤသို့ဆို သည်။
သမ္မာကျမ်းစာထဲက ဘုရားသခင်၏သန့်ရှင်းသူတိုင်းသည် အစာ ရှောင်ဆုတောင်းကြသည်။ အစာရှောင်ခြင်းသည် စိတ်နှလုံးပါ လျက်ဆုတောင်းခြင်း၊ ညဉ်းတွားခြင်း၊ နောင်တတရား၊ ရန်သူများ လက်မှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုရှာဖွေခြင်း၊ သို့မဟုတ် အထက်မှ ဥာဏ်ကိုရှာဖွေခြင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိပါသည်။ မောရှေသည် သိန တောင်တွင် အစာရှောင်ဆုတောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သခင်သည် လည်း သဲကန္တာရတွင် အစာရှောင်ဆုတောင်းသည်။ ယောရှု၊ ဒါဝိဒ်၊ ဧဇရ၊ နေဟမိ၊ ဒံယေလ၊ နှင့် ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်၏တ ပည့်များ၊ အန္န၊ တမန်တော်များ၊ ပေါလုနှင့်ဗာနဗ၊ နှင့်အခြားသော သူများသည် အစာရှောင်ပြီး ဆုတောင်းခဲ့ကြပါသည်။ ဘုရားသခင် ၏သန့်ရှင်းသူများသည် အစာရှောင်လျက်ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်အားစောင့်မျှော်သဖြင့် အဖြေကိုရရှိခဲ့ကြပါသည်။ ဆု တောင်းခြင်းဖခင်ကြီးများသည် သမ္မာကျမ်းစာခေတ်ကတည်းက အစာရှောင်ကြသည်နည်းတူ ဆုလည်းတောင်းကြပါသည်။ ခရစ် ယာန်တစ်ယောက်သည် အစာရှောင်ဆုတောင်းသည့်အခါ အ ပေါင်းအပါကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ကယ်တင်ရှင်ပင်လျှင် အစာရှောင်ဆုတောင်းတော်မူခဲ့သည်။ သို့သော် သူ့တပည့်တော် များအား အစာရှောင်ဆုတောင်းကြရန် သွန်သင်ပေးထားသည်။ သူကောင်းကင်ဘုံသို့ [တက်ကြွတော်မူပြီး]နောက်တွင် အစာ ရှောင်ဆုတောင်းကြသည်။ (John R. Rice, D.D., ဆုတောင်းခြင်း၊ တောင်းလျှောက်ခြင်းနှင့်လက်ခံရရှိခြင်း၊ Sword of the Lord Publishers, ၁၉၇၀၊ စာ- ၂၁၅ )
ဒေါက်တာ Rice က "ဆုတောင်းခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်လာသည့်နိူးထမှု" အကြောင်းကို ပြောဆိုခဲ့သည်။ ( ၎င်း၊ စာ-၂၂၇)
သို့ရာတွင် အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ဆုတောင်းခြင်းသည် နိူးထမှုကို "ဖြစ်လာစေ" သည်ဟု မထင်မှတ်သင့်ပါ။ Rev. Iain H. Murray က မှန်မှန်ကန်ကန် ဤသို့ဆိုထားသည်။
ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနည်းလမ်းအဖြစ် ဆုတောင် ခြင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ သူ၏ပြည့်စုံလာမည့်ရည်ရွယ်ချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်တည်နေစေလာသည့်သဘောမျိုးမဟုတ်ဘဲ သူအ ပေါ် ကျွန်ုပ်တို့၏မှီခိုအားထားမှု ကိုသင်ယူရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကို အ ကူအညီပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ဆုတောင်းခြင်းကို နားလည်သ ဘောပေါက်ခြင်းသည် နှုတ်ထွက်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် ကံသာအဓိက ဝါဒ၊ ဘုရားသခင်ကိုသိမှတ်သည့်စိတ်သဘောနှင့် ခေတ်ပြိုင်စာ ရေးသူများက "မူရင်းအမြစ်နှင့်ဆိုင်သောဆုတောင်းခြင်းနှင့်အစာ ရှောင်ခြင်း" ကိုဖြစ်စေခြင်းများသို့ ဦးဆောင်ခြင်းမှ ကင်းဝေးစေ သည်။ (Rev. Iain H. Murray, Pentecost Today? နိူးထမှုကို နားလည်သဘောပေါက်ရန်အတွက် သမ္မာကျမ်းစာအခြေခံ၊ The Banner of Truth Trust, ၁၉၉၈၊ စာ- ၆၉ )
"ဘုရားသခင်သည် မိမိလူတို့ကို ကောင်းကြီးပေးရန် အကြံအစည်ရှိသောအခါ၊ သူတို့အား ဦးစွာ ဆုတောင်းစေသည်"ဟု ပြောဆိုခြင်းမှာ ကောင်းသောပြောဆိုမှုဖြစ်သည်။ ဂျွန်ဝယ်စလီ က ၎င်းကို အခြားနည်းလမ်းအားဖြင့် ဤသို့ပြောဆိုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်အပေါ်တွင် မျက်မှောက်ပြုလျက် အ စာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုပြုကြပါစို့။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦးတည်ထား ချက်သည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောဘုရားသခင်ကို ဘုန်း ထင်ရှားစေရန်ဖြစ်သည်။ (The New Encyclopedia of Christian Quotations, Baker Book House, ၂၀၀၀၊ စာ- ၃၆၀ )
အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ဆုတောင်းခြင်းတို့သည် နိူးထမှုကို "ဖြစ်စေသောအရာ" များမဟုတ် ကြပေ။ ဘုရားသခင်သာလျှင် ထိုသို့ဖြစ်စေသောသူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အစာရှောင်ခြင်း နှင့်ဆုတောင်းခြင်းတို့တွင် ဘုရားသခင်ထံသို့ သာ၍နီးကပ်လာကြသည်။ သူက သင့်မြတ်သည် ဟုမြင်သောအခါ နိူးထမှုကို သွန်းလောင်းလာပေမည်။ ထိုအမှုအရာအားလုံးသည် ဘုရားသခင် ၏လက်ယာတော်ပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် နိူးထမှုဖြစ်ပေါ်သည့်အချိန်တွင် လူတို့၏ဆုတောင်း ခြင်းသည် အရှိန်ပြင်းလာပြီး လူတို့က အစာရှောင်ဆုတောင်းကြသောကြောင့် နက်နဲပြီး ကြွယ်ဝလာပေသည်။ ထိုအမှုအရာသည် ဂျွန်ဝယ်စလီမေးမြန်းတော်မူခဲ့သကဲ့သို့ ဘုရားသခင် ကနိူးထမှုကို စေလွှတ်တော်မူသောအချိန်တွင်ဖြစ်သည်။
အစာရှောင်ဆုတောင်းဖို့အတွက် နေ့ရက်သတ်မှတ်ပြီးပြီလား။ ကျေးဇူးတော်ပလ္လင်တွင် မုန်တိုင်းထန်ပြီး ထိုအထဲ၌ ခိုလှုံကိုးစား ပါ။ သနားခြင်းကရုဏာသည် ဆင်းသက်လာပေလိမ့်မည်။ (ဂျွန်ဝယ်စလီ၏စာများ၊ စာ- ၃၄၀)
ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်က ဆုတောင်းခြင်း၏တန်ခိုးကိုပေးတော်မမူလျှင် ဂျွန်ဝယ် စလီဖော်ပြခဲ့သောနိူးထမှုမျိုးကို ကျွန်ုပ်တို့အချိန်ကာလတွင် မရှိနိူင်ကြောင်း အတွေ့အကြုံအား ဖြင့် သိနိူင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်က်ိုယ်တိုင်သာလျှင် ''သနားခြင်းကရုဏာဆင်းသက်လာသည် အထိ ကျေးဇူးပလ္လင်ကို" လှုပ်ခတ်နိူင်သည့်ဆုတောင်းခြင်းကို အစပြုစီရင်သူဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည်သာ အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် အရှိန်ပြင်းသောနိူးထမှုကို စီရင် သူဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည်သာ ထိုသို့သောအရာများကိုအစပြုစီရင်သူဖြစ်သောကြောင့် နိူးထမှုကိုစေလွှတ်လာရန် သူကျေနပ်အားရနှစ်ထောင်းသည့်နည်းလမ်းအတိုင်း ဆုတောင်းနိူင် ကြပါသည်။ သို့မဟုတ်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ဆုတောင်းခြင်းသည် အချည်းနှီး သက်သက်ဖြစ်လာပေမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်တော်ကိုရှာလျက် ကျွန်ုပ် တို့၏ဝိညာဉ်များကို ဘုရားသခင်၌ အပ်နှံကြပါစို့။ သူ၏အသင်းတော်၌ ဘုန်းတော်ထင် ရှားစေရန် အစာရှောင် ဆုတောင်းကြပါစို့။ ဘုရားသခင်အားဗဟိုပြုထားသည့် ထိုသို့သောဆု တောင်းခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းသာလျှင် စစ်မှန်သောကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြင့် ပတ်ရစ်လွှမ်းခြုံ စေနိူင်သည်။ ကျေးဇူးပြုပြီး မတ်တပ်ရပ်လျက် " ဆုတောင်းရန် ကျွန်ုပ်တို့ကိုသွန်သင်ပါ" သီချင်းကို တဖန်ဆိုကြပါစို့။ သီချင်းစာရွက်ပေါ်တွင် နံပါတ် ၆ ဒုတိယပိုဒ် ဖြစ်သည်။
၃။	တတိယအချက်၊ ကျွန်ုပ်တို့အစာရှောင်ဆုတောင်းရန်လိုအပ်ပြီး ၎င်းမှာ လူတိုင်းပြောင်းလဲလာရန်ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်က ပရောဖက်ဟေရှာယအားမိန့်တော်မူသည်မှာ ဤသို့ဖြစ်သည်။
"ငါနှစ်သက်သောအစာရှောင်ခြင်းဟူမူကား၊ မတရားသောအချည် အနှောက်ကိုချွတ်ခြင်း၊ လေးသောဝန်ကိုချခြင်း၊ညဉ်းဆဲခံရသော သူတို့ကိုလွှတ်ခြင်း၊ ထမ်းဘိုးရှိသမျှကိုချိုးခြင်းမဟုတ်လော။"(ဟေရှာယ ၅၈း ၆ )
တပည့်တော်များကူညီမပေးနိူင်သောလူငယ်လေးသည် "မကောင်းသောအမှုအရာ၏ ရစ်ပတ်ခြင်းကို" ခံစားရပါသည်။ တပည့်တော်များသည် ထိုသူကို အကူအညီမပေးနိူင်ကြပါ။ ကိုတော်က ဤသို့ဆိုသည်။
"ဆုတောင်းခြင်း၊ အစာရှောင်ခြင်းမှတပါး အဘယ်သို့သောအားဖြင့်၊ ထိုနတ်မျိုးသည် မထွက်နိူင်ဟုမိန့်တော်မူ၏။"(မာကု ၉း ၂၉ )
အသင်းတော်သို့ရောက်လာသောသူအချို့တို့သည် ထိုသို့သောအခြေအနေတွင် ရှိနေကြသည် ကို စဉ်းစားမိပါသလား။ စာတန်သည် "သူတို့မယုံကြည်လာစေရန် သူ့တို့၏စိတ်နှလုံးကိုမှောင် မိုက်စေသည့် ဤလောက၏ဘုရား"မဟုတ်ပေဘူးလား။ (၂ကော ၄း၄) ဘုရားသခင်က ဤသို့ မိန့်တော်မူသောအခါ ငါတို့ကို စကေားပြောနေသည်ဟု မထင်မိဘူးလား။
ချားလ်ဝယ်စလီသည် ဤတေးသီချင်းကိုသီကုံးသောအခါ သူ့စိတ်နှလုံး၌ ဟောရှာယကျမ်းကို အမှတ်ရလိမ့်မည်ဟု ထင်မိသည်။
သူသည် အပြစ်၏တန်ခိုးများကို ချိုးဖျက်ခဲ့သည်၊
("ထောင်ပေါင်းများစွာသောစကား" ချားလ်ဝယ်စလီ ၁၇၀၇-၁၇၈၈ ရေးစပ်သည်။)
ဤတေးသီချင်းကို အားလုံးမတ်တပ်ရပ်ပြီး သီဆိုကျူးဧကြပါစို့။
ဤနေရာ၌မပြောင်းလဲသေးသောသူအချို့တို့၏အသက်တာများတွင် ထိုသို့လုပ်ဆောင် ရန် ခရစ်တော်အတွက် မည်သို့အစာရှောင်ပြီး ဆုတောင်းရမည်နည်း။ စာတန်၏ကျော့ကွင်းနှင့် လောကထဲတွင်ရှိသောအပြစ်၏တန်ခိုးကြိုးပျက်လာစေရန် ခရစ်တော်အား မည်သို့ဆုတောင်းရ မည်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်ထံသို့ မည်သို့အစာရှောင်ဆုတောင်းရမည်နည်း။
"မတရားသောအချည် အနှောက်ကိုချွတ်ခြင်း၊ လေးသောဝန်ကိုချ ခြင်း၊ ညဉ်းဆဲခံရသော သူတို့ကိုလွှတ်ခြင်း၊ ထမ်းဘိုးရှိသမျှကို ချိုးခြင်း….။" (ဟေရှာယ ၅၈း ၆ )
နိူးထမှုဖြစ်ပေါ်သည်အချိန်တွင် ချားလ်ဝယ်စလီ၏အစ်ကိုဖြစ်သူ ဂျွန်ဝယ်စလီက ထိုအကြောင်း ကို ဤသို့ဆိုသည်။
အစာရှောင်ဆုတောင်းဖို့အတွက် နေ့ရက်သတ်မှတ်ပြီးပြီလား။ ကျေးဇူးတော်ပလ္လင်တွင် မုန်တိုင်းထန်ပြီး ထိုအထဲ၌ ခိုလှုံကိုးစား ပါ။ သနားခြင်းကရုဏာသည် ဆင်းသက်လာပေလိမ့်မည်။ (၎င်း)
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းကို နောက်တစ်ပတ်တနင်္ဂနွေနေ့တွင် အသေအချာလုပ်ဆောင်ပါရ စေ။ အိမ်၌ ထိုသို့လုပ်ဆောင်နိူင်သောသူသည် အိမ်၌အစာရှောင်ဆုတောင်းပါစေ။ ယင်းသည် ပျောက်ဆုံးသောသူများအဖို့ဖြစ်သည်။ သင်တို့အားလုံး အစာရှောင်နိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေက အခွင့်ပေးခဲ့သော် အစာရှောင်ပြီးဆုတောင်းနိူင် သောသူတို့သည် ထိုသို့လုပ်ဆောင်ကြပါစေ။ ထို့နောက် နောက်တစ်ပတ်စနေနေ့ ညနေ ၅း၃၀ တွင် ဘုရားကျောင်းသို့အတူတကွပြန်လာကြပြီး အတူတကွ တဖန် ဆုတောင်းကြမည်။ ထို့ နောက် ကျွန်ုပ်တို့၏အစာရှောင်ခြင်းကို အစားအသောက်ဖြင့် အဆုံးသတ်ပြီး ဘုရားသခင်၌ ဝမ်းမြောက်လျက် အိမ်သို့ပြန်မည်။ တကယ်တော့ ချားလ်ဝယ်စလီ၏ဓမ္မသီချင်းသည် အလွန် မှန်ကန်ပေသည်။ တဖန် ပြန်ဆိုကြပါစို့။
ယနေ့ညတွင် ပျောက်ဆုံးသောသူ တစ်စုံတစ်ဦးရှိပါသလား။ သင်တို့အတွက်ဆု တောင်းပေးမည်။ စာတန်၏ချုပ်နှောင်ကြိုးမှလွတ်မြောက်ရန်နှင့်သူ၏အသွေးတော်အားဖြင့် သင်၏အပြစ်ကိုဆေးကြောရန် ယေရှုခရစ်ကို သင်လိုအပ်ပေသည်။ ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုး စားပြီး ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပါသည်။
ဒီတစ်ပတ်၊ အထူးသဖြင့် စနေနေ့တွင်ဆုတောင်းရမည့်အချက်များကို တွေ့ရပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစာရှောင်ဆုတောင်းကြသည်ဖြစ်၍ ပျောက်ဆုံးသူများအတွက်လည်း ဆု တောင်းရပါမည်။
၁၀။ အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းကို သောကြာနေ့ ညနေစာ စားပြီးသည့် အချိန်တွင် အစပြုပါ။ စနေနေ့ ညနေ ၅း ၃၀ နာရီအချိန်တွင် အသင်း တော်၌ အစာစားသည်တိုင်အောင် သောကြာနေ့ ညစာစားသည့် အချိန်မှစ၍ အဘယ်အရာ ကိုမျှ မစားပါနှင့်။
၁၁။ ဆုတောင်းရန် အရေးအကြီးဆုံးသောအရာမှာ ကျွန်ုပ်တို့ အသင်း တော်ရှိလူငယ်များပျောက်လဲလာရန် ဖြစ်သည်ကို သတိရပါ။ ထိုအ ပြင် ယနေ့အချိန်တွင် အသင်းတော်၌ ရောက်ရှိလာသောလူငယ်များ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ ရေရှည်နေ ထိုင်သောသူများဖြစ်ရန် ဆုတောင်းပါ။
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ ကျမ်းစာဖတ်ကြားခြင်းကို မစ္စတာ Abel Prudhomme က ဆောင်ရွက်ပါသည်။ မဿဲ ၆း ၁၆-၁၈
"သင့်အဖို့ဆုတောင်းနေသည်။"၊ (S. O’Malley Clough, ၁၈၃၇-၁၉၁၀) ရေး စပ်သည်။
(မဿဲ ၉း၁၅၊ တမန် ၉း၉၊ ၁၁။ ၁၃း၂၊၃။
၂ကော ၁၁း၂၇။ မဿဲ ၉း ၁၅ )
၁။ ပထမအချက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစာရှောင်ဆုတောင်းရန်လိုအပ်ပြီး ၎င်း မှာ စာတန်၏တန်ခိုးကိုအနိူင်ယူဖို့ ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းရန်ဖြစ် သည်။ မာကု ၉း ၂၈-၂၉၊ ဧဖက် ၆း ၁၂
၂။	ဒုတိယအချက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အစာရှောင်ဆုတောင်း ရန်လို အပ်ပြီး ၎င်းမှာ နိူးထမှုကိုစေလွှတ်ခြင်းအားဖြင့် ကြားဝင်ဖြန် ဖြေပေးဖို့ ဘုရားသခင်ကို ဆုတောင်းရန်ဖြစ်သည်။ ၂ကော ၁၁း ၂၇
၃။	တတိယအချက်၊ ကျွန်ုပ်တို့အစာရှောင်ဆုတောင်းရန်လိုအပ်ပြီး ၎င်းမှာ လူတိုင်းပြောင်းလဲလာရန်ဖြစ်သည်။ ဟေရှာယ ၅၈း ၆၊ မာကု ၉း ၂၉၊ ၂ကော ၄း ၄)